greatest - Synonyms of greatest | Antonyms of greatest | Definition of greatest | Example of greatest | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for greatest
Top 30 analogous words or synonyms for greatest
ဝှစ်တနီ ဟယူစတန် ဝှစ်တနီ ဟယူစတန် (Whitney Elizabeth Houston) သည် ဂရမ်မီဆုရခဲ့ဖူးသူ အမေရိကန် တေးသံရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည့်အပြင် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်နှင့် ထုတ်လုပ်သူလည်း ဖြစ်သည်။ ယခင်က မော်ဒယ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည်။ သူမ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်း ဖြန့်ချိသည့် Saving All My Love for You၊ How will I Know၊ The Greatest Love of All၊ Where Do Broken Hearts Go၊I Wanna Dance With Somebody (Who Love Me) တို့မှာ အရောင်းရဆုံး တေးအယ်လ်ဘမ်များ ဖြစ်သည်။ "I will always love you" မှာ ကမ္ဘာတလွှား လူ့သိအများဆုံးသော သူမ၏ သီချင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။
Hardcore punk ၁၉၈၀ အစောပိုင်း အမေရိကန်တွင် underground မှနေ၍ hardcore ပေါက်ဖွားလာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ဝါရှင်တန်ဒီစီ၊ နယူးယောက်၊ ဂျာစီ၊ ဘော်စတွန် နှင့် ဩစတြေးလျ၊ ကနေဒါ နှင့် ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်း တို့ပါဝင်သည်။ hardcore သည် straight edge လှုပ်ရှားမှုမှ ပေါက်ဖွားလာခဲ့သည်။ Hardcore သည် ၁၉၈၀ independent record labels များမြင့်တက်လာမှုတွင် ကြီးမားစွာ ပါဝင်ခဲ့သည်။ underground ဂီတဖြစ်ရပ်မှ DIY ethics နှင့်လည်းသက်ဆိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ဂီတအမျိုးအစား တော်တော်များများကို လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ mainstream အောင်မြင်မှု အတွေ့အကြုံရရှိခဲ့သည်။ alternative rock, grunge, alt-metal, metalcore, thrash metal, post-hardcore အစရှိသဖြင့် ဖြစ်သည်။ Black Flag ၏ "Damaged", Minutemen ၏ "Double Nickets on the Dime" နှင့် Husker Du ၏ "New Day Rising" တို့သည် Rolling Stone ၏ The 500 Greatest Albums of All time in ၂၀၀၃ စာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ Dead Kennedys သည် ၂၅ နှစ် ကာလအပိုင်းအခြားကို ကျော်လွန်၍ ရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ တွင် Rolling Stone စာရေးဆရာ David Fricke ရွေးချယ်ထားသော 100 Greatest Guitarish စာရင်းထဲတွင် Black Flag ၏ "Greg Ginn" ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဂီတအမျိုးအစားသည် အင်္ဂလိပ်စကားပြောသော အနောက်နိုင်ငံများတွင် စတင်ခဲ့သော်လည်း အမှတ်ရစရာ hardcore ဖြစ်ရပ်များသည် အီတလီ၊ ဘရာဇီး၊ ဂျပန်၊ ဥရောပနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင် တည်ရှိခဲ့သည်။
Rockabilly Rockabilly ပုံစံထဲတွင် ထောင်ချီသော ဂီတသမားသီချင်းများ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ online database အရ Aနှင့် စသောဂီတသမားများ ၂၆၂ ယောက်ခန့်ရှိသည်။ record company အများစုသည် rockabilly မှတ်တမ်းများဖြန့်ချီခဲ့သည်။ အဓိကသီချင်းစာရင်းတွင် အောင်မြင်ခဲ့ပြီး အနာဂတ် rock ဂီတသမားများသို့ လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ Wanda Jackson ကဲ့သို့ သီးခြားအမျိုးသမီးဖျော်ဖြေသူများသည် rockabilly ဂီတကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ Gene Summers သည် Rockabilly Hall of Fame တွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၈-၅၉တွင် သူ၏ Jan/Jane 45 ကိုဖြန့်ချီခဲ့သည်။ သူသည် rockabilly ဂီတကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၄ တွင် Alabama Shake ကိုဖြန့်ချီခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ခုနှစ် တွင် Summer ၏အကျော်ကြားဆုံး school of Rock n' Roll မှတ်တမ်းကို ဖြန့်ချီခဲ့ပြီး Record Collector မဂ္ဂဇင်းတွင် "100 Greatest Rock n' Roll Records" တွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
စတိဗ်ဂျော့စ် "We are deeply saddened to announce that Steve Jobs passed away today. Steve's brilliance, passion and energy were the source of countless innovations that enrich and improve all of our lives. The world is immeasurably better because of Steve. His greatest love was for his wife, Laurene, and his family. Our hearts go out to them and to all who were touched by his extraordinary gifts"
Pop punk Rock Sound မဂ္ဂဇင်းတွင် The Wonder Year တီးဝိုင်း၏ "The Greatest Generation" Album သည် ၂၀၁၃၏အကောင်းဆုံး album တွင်ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ဆယ်စုနှစ်မှ အမျိုးအစား အကောင်းဆုံးနှစ်မှ album ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Kerrang! ကပြောကြားသည်မှာ စာသားနှင့် ဂီတဆိုင်ရာမှ တီထွင်မှုအသစ်များဆီသို့ အမျိုးအစားကို တွန်းပို့ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ၂၀၁၄အစောပိုင်းတွင် Wesh တီးဝိုင်း Neck Deep သည် သူတို့၏ ပထမဆုံးပွဲဦးထွက် album "Wishful Thinking" ထွက်ရှိလာခဲ့ပြီး Rock Sound မဂ္ဂဇင်းက all time အကောင်းဆုံး UK pop-punk မှတ်တမ်းဖြစ်လာခဲ့သည်ဟု ခေါ်သည်။ ၂၀၁၄တွင် ဩစတေးလျတီးဝိုင်း5seconds of Summer ၏ "self-titled" album သည် Billboard 200 သီချင်းစာရင်းတွင် နံပါတ်တစ်နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အခြားနိုင်ငံသားအများအပြားတွင် Alternative Press မဂ္ဂဇင်းမှ pop-punk ဖြစ်ရပ်၏ ဈေးကွက်အတွက် အရေးပါသော တီးဝိုင်းများကို လျင်မြန်စွာ ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၂၀၁၅တွင် All Time Low တီးဝိုင်း၏ "Future Hearts" album သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်လျှောက်တွင် Billboard 200 တွင်နံပါတ် ၂နေရာသို့ အချပ်ရေ ရ၅၀၀၀ကျော်ရောင်းချနိုင်မှုနှင့်အတူ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ album ကို pop rock နှင့် power pop နှင့် pop punk ဟူ၍ဖော်ပြခဲ့သည်။ Neck Deep ၏ ဒုတိယမြောက်album "Life’s Not Out to Get You" (၂၀၁၅) သည် UK သီချင်းစာရင်းတွင် နံပါတ်၈နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး Billboard 200 တွင် နံပါတ် ၁၇ နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ဘီ-၂ ကိုယ်ပျောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ် Some B-2 advocates argued that procuring twenty additional aircraft would save money because B-2s would be able to deeply penetrate anti-aircraft defenses and use low-cost, short-range attack weapons rather than expensive standoff weapons. However, in 1995, the Congressional Budget Office (CBO), and its Director of National Security Analysis, found that additional B-2s would reduce the cost of expended munitions by less than US$2 billion in 1995 dollars during the first two weeks ofaconflict, in which the Air Force predicted bombers would make their greatest contribution;asmall fraction of the US$26.8 billion (in 1995 dollars) life cycle cost that the CBO projected an additional 20 B-2s would cost.